सरकारी जागिरको खोजीमा हुनुुहुुन्छ ? लोक सेवाले माग्यो एघार सय नायब सुुब्बा - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
काठमाडौं । के तपाई सरकारी जागिरको खोजीमा हुनुुहुुन्छ ? त्यसो हो भने तपाईको त्यो चाहाना पुरा हुन सक्छ है ।
बुधबार मात्र लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाका विभिन्न समूहमा १ हजार १ सय १२ जना नायब सुब्बाका लागि दरखास्त माग गरेको छ । जसमध्ये ४ सय ५८ जना खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुनेछन् । बाँकी भने निजामति सेवाको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट छानिनेछन् ।
नायव सुब्बा दरखास्त दिन न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रबणिता उत्तीर्ण वा सो सरहको नेपाली नागरिक हुनुपर्छ ।
2751 पटक पढिएको